Ixabiso eliphantsi lokujonga isichumisi kumatshini wokuthengisa umatshini kunye nomzi mveliso YiZheng
Inkqubo ye- Nkqo isichumisi Umxhubi Machine sisixhobo sokuxuba kunye nesishukumisayo kumgca wemveliso yesichumiso. Inamandla axhokonxayo, anokusombulula ngokufanelekileyo iingxaki ezinjengokubambelela kunye nokudityaniswa.
Yintoni iVertical Fertilizer Mixer Machine?
Nkqo isichumisi Umxhubi Machine sisixhobo sokuxuba esibalulekileyo kwinkqubo yemveliso yesichumiso. Inesilinda sokuxuba, isakhelo, iimoto, isinciphisi, ingalo ejikelezayo, umhlakulo ovuselelayo, ukucoca isikrweqe, njl njl. Lo matshini wamkela i-cycloid reducer yenaliti ukuqhuba ngokuthe ngqo, eqinisekisa imveliso ekhuselekileyo.
Usetyenziselwa ntoni umatshini wokuxuba ovela nkqo?
Eyethu Nkqo isichumisi Umxhubi Machine njengesixhobo sokuxuba esingafunekiyo kumgca wokuvelisa isichumisi. Isombulula ingxaki yokuba isixa samanzi esongezwe kwinkqubo yokuxuba kunzima ukusilawula, kwaye ikwasombulula ingxaki yokuba izinto zilula ukubambelela kunye nokudityaniswa ngenxa yomkhosi omncinci ovuselelayo womxube wokuchumisa jikelele.
Ukusetyenziswa komatshini wokuxuba ojikelezileyo
Nkqo isichumisi Umxhubi Machine Uza kudibanisa izinto ezahlukeneyo zokufezekisa injongo yokuxuba iyunifomu epheleleyo.
Izinto eziluncedo ze nkqo isichumisi Umxhubi Machine
(1) Ngenxa yokuba ibandla cross-axis iqhagamshele phakathi umhlakulo eshukumisayo kunye ingalo ezijikelezayo, kunye intonga ezotyhalo okanye iqhosha lemenyu zilungiselelwe ukulawula umsantsa ukusebenza umhlakulo udushe, isenzeko jamming izinto nzima ukuba ngokusisiseko isuswe ukumelana nokusebenza kunye nokunxiba.
(2) I-engile phakathi komphezulu osebenzayo womhlakulo oshukumisayo kunye nolwalathiso lwangaphambili kuzo zombini iindlela ezithe nkqo nezithe tye zibuthuntu, ezinokuphucula isiphumo sokuvuselela kunye nokuphucula umgangatho wokudibanisa.
(3) Izibuko lokukhupha libekwe eludongeni lwecala lomgqomo. Umgqomo unokujija ujikeleze ngokuthelekisa i-rack, kwaye iscraper sinokusetwa ukukhawulezisa ukukhutshwa nangocoselelo ngakumbi.
(4) Ilula kwaye kulula ukuyigcina.
Nkqo isichumisi Umxhubi Machine Umboniso weVidiyo
Nkqo isichumisi Umxhubi Machine Model Ukukhetha
M40 m3 / h
Isantya shaft eshukumisayo
Nyusa isantya se-hopper
Amandla okuqhuba iimoto
ukuphucula amandla enjini
Ubungakanani obukhulu besayizi yamasuntswana
Ubume bemilo （HxWxH）
Egqithileyo Umxube wesichumisi seBB
Okulandelayo: Rotary Single Cylinder Ukuqwayita Matshini isichumiso Ukwenziwa
Intshayelelo Yintoni umatshini wokupholisa isichumiso? Umatshini wokupholisa iipellets wenzelwe ukunciphisa ungcoliseko lomoya obandayo kunye nokuphucula imeko yokusebenza. Ukusetyenziswa komatshini opholileyo wegubu kukunciphisa inkqubo yokuvelisa isichumisi. Ukutshatisa nomatshini wokomisa kunokuphucula kakhulu intsebenziswano ...